Sezvo nyika inotungamira mumiririri maduku emakemikari anticancer reagents uye kinase inhibitors, Cofttek inopa zviuru zvemakemikari kumayunivhesiti, makambani emishonga uye kutsvakurudza kwepfungwa kunotanga. Mune mishonga yekutsvakurudza mishonga yemapurisa, Cofftek inopa chibvumirano chekugadzirisa maitiro, kushandiswa uye kugadzirwa kwepamusoro-soro michina. Tiri kushanda kuti tive nekuunganidza zvakanyanya pasi rose zvakasanganiswa zviduku zvinyorwa zvematokari. Cofftek ine basa rakasimba kwazvo mukugadzirwa kwemakemikari, hutungamiri hwehutano, hutungamiri hwehuwandu uye kutengesa ...
"Cofttek iri ISO 9001: 2008 yakavimbiswa uye mabasa ayo ose emabhizimisi ari kunyatsotevedzana nemitemo yenyika yehutano hwehutano."
Vatungamiri vekambani yekambani vese vane madhigiriji muzvigadzirwa zvehupenyu. Zvinopfuura makore 10 anoshandisa ruzivo mumunda wemishonga yemakemikari inowanikwa. Chiitiko chakapfumisa mukubatanidza michematorial chemistry, mishonga yemakemikari, yakagadziridzwa kushandiswa nekugadzirwa kweprojekti. Kupfuura 80% yezvikwata zvekugadzira mumashamba ehurumende ane chikoro chechikoro, uye hafu yavo ine chiremba chetenzi. Ndivo vose vanoita zvekushanda mumhizha.